မက္ကဆီကိုနှင့် အမေရိကန် နိုဝင်ဘာလတွင် နယ်စပ်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် သဘောတူညီမှုရရှိ - Xinhua News Agency
မက္ကဆီကိုစီးတီး၊ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မက္ကဆီကိုနှင့် အမေရိကန်အစိုးရတို့သည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း တိုးတက်မှုအခြေအနေရ နိုဝင်ဘာလတွင် ၎င်းတို့၏ နယ်စပ်ဂိတ်များပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြောင်း မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ သမ္မတ Andres Manuel Lopez Obrador က အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။“မြောက်ပိုင်းနယ်စပ်ကိုပြန်ဖွင့်မှာပါ။ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ကစပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နယ်စပ်တွေက ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်တော့မှာပါ’’ ဟု Lopez Obrador က မက္ကဆီကိုစီးတီးမြို့ရှိ National Palace ၌ ပြုလုပ်သည့် ၎င်း၏ နေ့စဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် မက္ကဆီကို-အမေရိကန် နယ်စပ်အား ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မတ်လကတည်းက မဖြစ်မနေမဟုတ်သည့် သွားလာမှုများကို ပိတ်ထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ခရီးသွားလာခြင်းနှင့် ဈေးဝယ်ခြင်းတို့အတွက် ခရီးသွားလာခြင်းအား ကန့်သတ်ချက်များ ချမှတ်ခဲ့သော်လည်း ကုန်သွယ်ရေး၊ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး နှင့် အလုပ်သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေး အကြောင်းများကဲ့သို့အခြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖြတ်ကျော်မှုများအား သက်ရောက်မှု မရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
MEXICO CITY, Oct. 13 (Xinhua) — The governments of Mexico and the United States agreed to reopen their common border in November, following vaccination progress against COVID-19, Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador announced on Wednesday.
“The northern border will be opened. We will have normalcy on our northern border as of Nov. 1,” Lopez Obrador said during his daily press conference from the National Palace in Mexico City.
The Mexico-U.S. border has been closed to since March 2020 due to the COVID-19 pandemic.
The closure imposed restrictions on travel for tourism or shopping, but did not affect trade or other essential crossings, such as transit for goods and for work or health reasons. Enditem